Ny fanentanana miteraka fitakiana voaporofo fa mandaitra - Victor Mochere
Mila mamorona fanentanana lehibe ny orinasa. Tsy maintsy afaka mikaroka amin'ny fomba mahomby ny mpanjifany izy ireo ary manatitra votoaty hanosika azy hividy. Ny famokarana fangatahana dia paikady ara-barotra izay miteraka fahalianana amin'ny vokatra na serivisy alohan'ny hamidy azy. Izany dia atao amin'ny alàlan'ny famoronana fanentanana momba ny vokatra na serivisy ary mahatonga ny olona hieritreritra izany. Matetika amin'ny alalan'ny fanentanana ara-barotra no atao, toy ny dokam-barotra, ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ary ny media sosialy.
Ny fanentanana miteraka fitakiana dia mety hahomby amin'ny fampitomboana ny varotra. Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fampielezan-kevitra miteraka fitakiana mpamono olona dia afaka mampitombo ny varotra hatramin'ny 30%. Afaka mamorona sary tsara ho an'ny marika ihany koa izy ireo, ka mahatonga ny mpanjifa ho liana amin'ny fividianana ny vokatra na serivisy. Misy fomba maro samihafa hamoronana fanentanana miteraka fitakiana mpamono olona. miankina amin'ny vokatra na serivisy. Ny fomba mahazatra sasany dia ahitana:
Mamorona anarana mahasarika ny vokatra na serivisy
Mamorona tantara mahaliana ao ambadiky ny vokatra na serivisy
Mampiasa sary sy horonan-tsary
Mamorona votoaty mahasarika izay mora zaraina
Mampiasa sehatra media sosialy mba hahatratrarana mpihaino marobe haingana
Manolotra santionany na fanomezana maimaim-poana
Fampandrosoana fiaraha-miasa amin'ny orinasa hafa
Voaporofo fa mandaitra ny fampielezan-kevitra miteraka fitakiana mpamono olona
Ahoana no hamantarana olana ara-barotra fanombohana
Inona avy ireo singa fototra amin'ny fanentanana miteraka fitakiana?
Karazana fanentanana miteraka fitakiana tsara indrindra
Ireto ny fanentanana mahomby amin'ny famokarana fitakiana amin'ny indostria isan-karazany.
Mamorona fitarihana ary manova azy ireo ho mpanjifa mandoa vola
Mamorona fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miasa tsara indrindra aminao
Ampidiro sy kolokoloy ny fototry ny marary
Mitondra fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao na pejy fipetrahanao
Ampitomboy ny fahafantarana ny marika amin'ny alàlan'ny media sosialy
Araraoty ny fantsom-barotra nomerika rehetra
Ampitomboy ny fanomezana ho amin'ny tanjona mendrika
Ampitomboy ny tanjonao amin'ny alàlan'ny kendrena ampahan-tsena vaovao
Mahazoa hevi-baovao avy amin'ny fanadihadiana momba ny valin'ny mpanjifa
Mandrefy sy manatsara ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao
Mahazoa fidirana amin'ny fitaovana fampitam-baovao mahasoa sy fitaovana ara-barotra hafa
Jereo ny vokatrao ary hatsarao
Raha ny momba ny varotra dia matetika miatrika fanamby maro ny fanombohana. Mety tsy ho afaka hamantatra ny tsenan'ny tsena mety izy ireo, na mety tsy ho afaka hamokatra ny haavon'ny fangatahana ilaina. Ireo olana ireo matetika dia afaka manakana ny fanombohana tsy hanatratra ny tanjany feno sy hanatratrarana ny tanjony. Ny fomba iray handresena ireo fanamby ireo dia ny fijerena ny fangatahan'ny mpanjifa.
Raha afaka mahazo izay tadiavin'ny mpanjifa ny fanombohana, dia afaka mikendry tsara kokoa ny fampielezan-keviny sy ny vokatra arak'izany izy ireo. Afaka manampy ireo fanombohana hanatratra io tanjona io ny fampielezan-kevitry ny mpamono olona amin'ny alàlan'ny famoronana haavon'ny fangatahana mafy amin'ny vokatra na serivisy. Matetika io fanerena io dia mitarika amin'ny fivarotana avo kokoa sy fahatakarana tsara kokoa ny filan'ny mpanjifa.
Ny fanentanana miteraka fitakiana dia ezaka ara-barotra izay miteraka fahalianana amin'ny vokatra na serivisy vaovao. Mba hahombiazana dia tsy maintsy manana tetikady SEO voafaritra tsara atolotra sy mikendry ny mpihaino mety ny fampielezan-kevitra miteraka fitakiana. Misy singa manan-danja maromaro amin'ny fanentanana famokarana fitakiana. Ny voalohany dia ny famoronana ny fangatahana. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny dokam-barotra, fikarohana ara-barotra ary hetsika.
Ny singa faharoa dia ny fizarana ny vaovao. Izany dia azo atao amin'ny alalan'ny fampiasana fantsona toy ny printy, radio, fahitalavitra, ary Internet. Ny singa farany dia ny fampahavitrihana ny fangatahana. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny fikolokoloana firaka sy ny tahan'ny fiovam-po. Ny fanentanana mahomby amin'ny famokarana fitakiana dia hiteraka fitomboan'ny varotra sy fizarana tsena ho an'ny orinasa voakasik'izany.
Search Engine Optimization (SEO) dia dingana iray ahafahan'ny olona iray na orinasa iray mahita sy mamantatra ireo safidy maro azo ampiasaina amin'ny fanatsarana ny milina fikarohana. Ny safidy dia misy ny famoronana tranokala, fananganana rohy, fikarohana teny fanalahidy, ary famoronana votoaty. Ny fanatsarana ny milina fikarohana dia tena ilaina ho an'ny orinasa rehetra te hisarihana mpanjifa vaovao na hanorina ny marika.
Ny dingana voalohany amin'ny dingan'ny SEO dia ny famoronana tranonkala iray izay hahomby amin'ny fisarihana mpitsidika avy amin'ny milina fikarohana toa an'i Google sy Yahoo! Zava-dehibe ny mampiditra votoaty tokana ao amin'ny tranokalanao izay hanentana ny fahalianan'ny mpikaroka amin'ny milina fikarohana. Ny votoatinao dia tsy tokony hanome fampahalalana sarobidy fotsiny fa manana rohy miverina amin'ny tranokala hafa koa izay heverina fa manampy amin'ny fampitomboana ny fahitanao amin'ny milina fikarohana.
Ireto ny karazana fanentanana miteraka fitakiana tsara indrindra.
Ny famokarana fangatahana dia iray amin'ireo paikady ara-barotra mahomby indrindra any
Azo ampiasaina mba hanatratrarana mpihaino marobe haingana sy mahomby
Ny fampielezan-kevitra miteraka fitakiana mpamono no karazana fanentanana tsara indrindra hanatrarana ny tsena kendrenao
Izy ireo dia natao hamoronana fangatahan'ny mpanjifa mafy amin'ny vokatrao na serivisinao
Tena lafo tokoa ireo fanentanana ireo, saingy mendrika izany amin'ny fotoana maharitra
Ny tombom-barotra azo avy amin'ny fanentanana miteraka fitakiana dia ambony amin'ny ankapobeny ary izany no antony tokony handinihanao azy ireo foana
Ny fanentanana famokarana fitakiana tsara indrindra dia miparitaka amin'ny natiora, izay midika fa tonga hatrany amin'ny tranokalanao ny mpanjifa vaovao
Manolotra vokatra sy serivisy isan-karazany amin'ny vidiny mora izy ireo, izay mahasarika azy ireo ho an'ny mpanjifa mety
Ny orinasa dia mila miasa mafy amin'ireo karazana fanentanana ireo mba hametrahana azy ireo eo amin'ny tampony ary avy eo dia miteraka fidiram-bola betsaka araka izay tratra avy amin'izy ireo
Raha toa ianao ka afaka mampihatra tsara ny paikadin'ny famokarana amin'ny tenanao manokana, dia tsy misy antony tsy tokony hanaovanao izany
Tsy isalasalana fa ny fanentanana miteraka fitakiana dia fitaovana mahery vaika amin'ny fitarihana fitarihana sy fivarotana, saingy tsy ny rehetra no mahafantatra ny fomba fiasan'izy ireo. Voaporofo fa miasa ombieny ombieny ireo fanentanana miteraka fitakiana mpamono olona voalazanay etsy ambony. Antenaina fa manana fahatakarana bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ireo fanentanana ireo ianao izao sy ny karazana vokatra azony aterak'izany.